Facebook ပေါ်မှာ စီးပွားရေးအတွက် Profile ကကောင်းလား ? Page ကကောင်းတာလား ? - Discuss Agency
Facebook ပေါ်မှာ စီးပွားရေးအတွက် Profile ကကောင်းလား ? Page ကကောင်းတာလား ?
Oct 30, 2019 | Digital Marketing Knowledge
Facebook ပေါ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လာတဲ့သူတွေ နိုင်ငံတကာမှာရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော်တော်များများကတော့ Facebook ပေါ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုရင် Profile ပေါ်မှာသာ အားကိုးပြီးတော့ လုပ်နေကျတာတွေ့လာရပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် တစ်ချို့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ Facebook အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ ပြောဆိုနေတာတွေ့ရပေမယ့် အဲ့လို ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Facebook ပေါ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတာ မှန်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရသလို မှားတယ်လို့လည်း ပြောလို့မရပါဘူး။
အားနည်းချက်ကတော့ပိုများပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ Facebook Page ပေါ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ Business Details ကို အတိအကျရေးလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် Page Category ပါ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့အပြင် လူအများအပြားကို မြင်စေချင်တယ်ဆိုရင် Boost လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
နောက်ထက်တစ်ခုကတော့ Page နဲ့ Profile ကွာခြားချက်ကတော့ Profile မှာ Business လုပ်လို့ Fake Name, Fake Account စတာနဲ့ Report ပြုလုပ်ပြီဆိုရင် ပျက်ဖို့အသေချာပါပဲ။ နောက်ထက်တစ်ခုကတော့ Profile မှာ Analytics Data, ဘယ်ကနေ ဝင်ကြည့်တယ်၊ ဘယ်နိုင်ငံကအများဆုံးဝင်ကြည့်တယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ လူအများဆုံးဝင်ကြည့်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ကြည့်လို့မရပါဘူး။
နောက်တစ်ခု အားနည်းချက်ကတော့ Profile မှာ Friend ဦးရေ ၅၀၀၀ အထိပဲ ထားလို့ရတာဖြစ်ပြီး Page ကတော့ ကြိုက်သလောက် Like နဲ့ Follow လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် Page နဲ့ Profile ဘယ်ဟာ အားသာတယ် အားနည်းတယ်ဆိုတာ အနည်းငယ်ကို ပြောလိုက်ရုံနဲ့ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
နောက် အပတ်တွေမှာလည်း ကျနော်တို့ ပုံမှန် Facebook Knowledge နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကို ရေးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။